petitions [petitions] (my) - Traduire SPIP
Module #61 : petitions [petitions] fr my
Nouveau : 49 (69%) Modifié :7(9.9%)
bouton_radio_activer_petition Activer les pétitions တောင်းဆိုမှုကို အသက်ဝင်စေသည် 2020-07-28 01:17:23 MODIF Modifier
form_pet_adresse_site Adresse URL de votre site သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာ 2013-10-03 16:24:26 MODIF Modifier
form_pet_aucune_signature Aucune signature ne correspond à ce code… သင့်လက်မှတ်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ 2013-10-03 16:24:26 MODIF Modifier
form_pet_envoi_mail_confirmation Un courrier électronique de confirmation vient d’être envoyé à @email@. Vous devrez visiter l’adresse web mentionnée dans ce courrier pour valider votre signature. အတည်ပြုချက် စာစောင်ကို​ အီးမေးလ်နှင့် ပို့ပြီးပါပြီ၊ ပေးထားသော လိပ်စာသို့သွားပြီး သင်လက်မှတ်ကို အတည်ပြုပါ။ 2013-10-03 16:24:26 MODIF Modifier
form_pet_message_commentaire Un message, un commentaire ? မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာ ပေးလိုပါသလား? 2013-10-03 16:24:26 MODIF Modifier
form_pet_nom_site2 Nom de votre site web သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက် နာမည်ပေးပါအုံး 2013-10-03 16:24:26 MODIF Modifier
form_pet_votre_nom Votre nom သင့်နာမည် 2013-10-03 16:24:27 MODIF Modifier
bouton_radio_pas_petition Pas de pétition လျှောက်လဲချက်မလို 2013-12-14 12:13:52 OK Modifier
bouton_radio_petition_activee Pétition activée လျှောက်လဲချက် ​အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည် 2013-12-14 12:13:52 OK Modifier
bouton_radio_supprimer_petition Supprimer la pétition လျှောက်လဲချက် ပယ်ဖျက်ရန် 2013-12-14 12:13:52 OK Modifier
form_pet_confirmation Veuillez confirmer votre signature : သင့်လက်မှတ် ပြန်လည်​အတည်ပြုပါ 2013-10-03 16:24:26 OK Modifier
form_pet_deja_signe Vous avez déjà signé ce texte. ဒီစာစောင်ကို သင်မှတ်တမ်းတင်ပြီးပြီ 2013-10-03 16:24:26 OK Modifier
အရေးကြီးသည်၊ သင့်လက်မှတ်ကို အတည်ပြုရန် အောက်ပါ လိပ်စာကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သွားပါ၊ သို့မဟုတ်လျှင် တောင်းဆိုချက်သည် ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။ @url@ တက်ကြွစွာပါဝင်မှုအတွက် ကျေးဇူးအထူး သင်ပါသည်။ 2013-10-03 16:24:26 OK Modifier
form_pet_probleme_technique Problème technique, les signatures sont temporairement suspendues. နည်းပညာပြသနာ၊ လက်မှတ်ဖော်လို့မရ ဖြစ်နေသည်၊ ခဏလောက်ဆောင့်ပါအုံး၊ 2013-10-03 16:24:27 OK Modifier
form_pet_signature_validee Votre signature est validée. Merci ! သင့်လက်မှတ်ကို လက်ခံရရှိပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါဘဲ 2013-10-03 16:24:27 OK Modifier
form_pet_site_deja_enregistre Ce site est déjà enregistré ဒီဆိုက် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးပြီ 2013-10-03 16:24:27 OK Modifier
form_pet_url_invalide L’URL que vous avez indiquée n’est pas valide. သင်ဝင်လိုက်သောလိပ်စာ မရှိတော့ပါ 2013-10-03 16:24:27 OK Modifier
form_pet_votre_email Votre adresse email သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ 2013-10-03 16:24:27 OK Modifier
form_pet_votre_site Si vous avez un site Web, vous pouvez l’indiquer ci-dessous သင့်မှာ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိလျှင် အောက်တွင်ထည့်တွင်းနိုင်သည် 2013-10-03 16:24:27 OK Modifier
info_adresse_email ADRESSE EMAIL : အီးမေးလ်လိပ်စာ 2013-10-03 16:24:27 OK Modifier
info_site_web SITE WEB : ဝက်ဘ်ဆိုက် 2013-10-03 16:24:27 OK Modifier
lien_reponse_article Réponse à l’article ဆောင်းပါးသို့ ပြန်တုန့်ပြန်ပါ 2013-10-03 16:24:27 OK Modifier